तालमेलमा कांग्रेसको कीर्तिमानः कुन जिल्लामा कोसँग ?
दोस्रो जनआन्दोलनयता ३४ लाख विदेसिए
नाका कहिले खुल्छ भन्ने प्रश्नमा भारतीय राजूदतले भने-मधेसी मोर्चालाई सोध्नुस्
ग्यासको पाइपलाइन नै घरघरमा पुर्‍याइदिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
कता बस्दै छन् हिजोआज पारस,किन भएन निर्मल निवासको ढोका खुल्ला ?
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नक्कली डाक्टरको आतंक, प्रवेशिका र प्रमाणपत्र तह नै उत्तीण नगरेका एक दर्जन नक्कली डाक्टर पक्राउ
पत्रकार महासङ्घको २५औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु
नेपाली सेनाद्वारा एकहजार बाढीपीडितलाई निःशुल्क भोज
बाढीप्रभावितलाई राहत वितरण, महामारी फैलने सम्भावना
निर्वाचन विधेयकको दफावार छलफल रोकियो
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव मङ्सिर ४ र २१ को मिति प्रस्ताव
५ असार, काठमाडौं । पहिलो चरणको स्थानीय चुनावमा दलहरुबीचको तालमेल असफल भए पनि दोस्रो चरणमा मुख्यतः सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीले तालमेल अझ कसिलो बनाएका छन् । राप्रपासँगको तालमेल मीठो नभएपछि एमालेले भने दोस्रो चरणमा राप्रपासँगको तालमेललाई निरन्तरता दिएन ।दोस्रो चरणमा सबैभन्दा धेरै स्थानमा सबैभन्दा धेरै दलसँग तालमेल गर्नेमा नेपाली कांग्रेस अग्रस्थानमा देखिएको छ । देशको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले प्रमुख प्रतिस्पर्धी एमालेदेखि लिम्बुवान र खम्बुवान जस्ता दलहरुसँग पनि तालमेल गरेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ ।एकले अर्कोलाई प्रमुख प्रतिस्पर्धी ठानेका कांग्रेस र एमालेबीच रोल्पाको माडी गाउँपालिकामा तालमेल भएको छ भने चुनाव बहिस्कार गरेको बिप्लब माओवादीले थवाङमा कांग्रेससँग तालमेल गरेको छ । यद्यपि विप्लवले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठेका कार्यकर्तालाई गद्दार घोषित गरेका छन् ।
कांग्रेसले बुटवल उपमहानगरपालिका सहित अधिकांश स्थानमा माओवादीसँग तालमेल गरेको छ । राप्रपा, संघीय समाजवादी, लिम्बुवान, खम्बुवान जस्ता दलसँग पनि कांग्रेसले तालमेल गरेको छ ।विशेष गरी पूर्वी पहाडमा कांग्रेसले एमाले विरुद्ध सबै दलहरुलाई आफ्नो छातामुनि ल्याउने प्रयास गरेको छ । कांग्रेसले करीव ७० स्थानीय तहमा विभिन्न दलसँग तालमेल गरेको छ ।
फुङलिङ नगरपालिकामा कांग्रेसले मेयर र माओवादीले उपमेर लिएर तालमेल गरेका छन् । यहाँ एमाले एक्लै मैदानमा छ भने राप्रपाले उपमेयरमा मात्र उम्मेदवारी दिएर च्याँखे थापेको छ ।
इलामको सन्दकुर गाउँपालिकामा माओवादीले अध्यक्ष र लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च आवद्ध लिम्बुवानले उपाध्यक्ष लिएर तालमेल गरेका छन् । माङ्सेबुङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेस र उपाध्यक्षमा संघीय समाजवादी फोरमले उम्मेदवारी दिएर तालमेल गरेका छन् ।
बिराटनगर महानगरपालिकामा एमालेले मेयर र फोरम लोकतान्त्रिकले उपमेयर लिएर तालमेल गरेका छन् भने संघीय समाजवादीले मेयर र माओवादीले उपमेयर लिएर तालमेल गरेका छन् ।
रतुवामाई नगरपालिकामा माओवादीले मेयर र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले उपमेयर लिएर तालमेल गरेका छन् । पथरी शनिश्चरेमा पनि माओवादीले मेयर र फोरमले उपमेयर लिएर तालमेल गरेका छन् ।
कटहरी गाउँपालिकामा फोरमले अध्यक्ष र माओवादीले उपाध्यक्ष लिएर तालमेल गरेका छन् । धनपालथान गाउँपालिकामा पनि फोरमले अध्यक्ष र माओवादीले उपाध्इक्ष लिएर तालमेल भएको छ ।
धरानमा माओवादी–संघीय फोरम
सुनसरीका दुई उपमहानगरपालिकामध्ये धरानमा माओवादीले मेयर र संघीय समाजवादी फोरमले उपमेयर लिएर तालमेल गरेका छन् ।
धनकुटाः कांग्रेस,राप्रपा र संघीय फोरम
महालक्ष्मी नगरपालिकामा कांग्रेसले मेयर र राप्रपाले उपमेयर लिएर तालमेल गरेका छन् । चौबिस गाउँपालिकामा कांग्रेसले अध्यक्ष र संघीय समाजवादीले उपाध्यक्ष लिएर तालमेल गरेका छन् ।
त्यस्तै धनकुटाकै साँगुरीगढी गाउँपालिकामा पनि कांग्रेसले अध्यक्ष र संघीय समाजवादीले उपाध्यक्ष लिएर तालमेल भएको छ ।
भोजपुरमा एमाले बाहेक सबै एक ठाउँ
एमालेका प्रदेश नम्बर १ का सहसंयोजक शेरधन राईको जिल्लामा एमाले बिरुद्ध सबै दल एकजुट भएका छन् । राईकै गाउँपालिका हतुवागढीमा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष प्रेमकुमार राई विरुद्ध कांग्रेसले अध्यक्ष र माओवादीले उपाध्यक्ष लिएर ५ दलबीच तालमेल भएको छ ।
टेम्के मैयुम गाउँपालिकामा संघीय समाजवादीले अध्यक्ष र कांग्रेसले उपाध्यक्ष लिएर तालमेल गरेका छन् । साल्पा सिलिछो गाउँपालिकामा कांग्रेसले अध्यक्ष र संघीय समाजवादीले उपाध्यक्ष लिएर तालमेल गरेका छन् ।
रामप्रसाद राई गाउँपालिकामा कांग्रेस,संघीय समाजवादी र खम्बुवान पार्टीबीच तालमेल हुँदा कांग्रेसले अध्यक्ष र संघीयले उपाध्यक्ष लिएका छन् ।
आठराई गाउँपालिकामा कांग्रेसले अध्यक्ष र माओवादीले उपाध्यक्ष लिएर तालमेल गरेका छन् । फेदाप गाउँपालिकामा पनि कांग्रेसले अध्यक्ष र माओवादीले उपाध्यक्ष लिएर तालमेल गरेका छन् ।
बुटवल महानगरपालिकामा कांग्रेसले मेयर र माओवादीले उपमेयर लिएर तालमेल भएको छ । यहाँ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले पनि कांग्रेसलाई सघाएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकामा कांग्रेसले मेयर र जनमुक्तिले उपमेयर लिएर तालमेल भएको छ ।
सैनामैना नगरपालिकामा कांग्रेसले मेयर र माओवादीले उपमेयर लिएर तालमेल भएको छ । देवदह नगरपालिकामा पनि कांग्रेसले मेयर र माओवादीले उपमेयर लिएर तालमेल भएको छ ।
गुल्मीका अधिकांश गाउँपालिकामा सत्तारुढ कांग्रेस माओवादी चुनावी तालमेल भएको छ । धुर्कोट गाउँपालिकामा माओवादीले अध्यक्ष र कांग्रेसले उपाप्यक्ष लिएर तालमेल भएको छ ।
कालिगण्डकी गाउँपालिकामा कांग्रेस माओवादीले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष लिएर तालमेल गरेका छन् । रुरु गाउँपालिकामा माओवादीले अध्यक्ष र कांग्रेसले उपाध्यक्ष लिएर तालमेल गरेका छन् ।
अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिका सहित ४ स्थानीय तहमा कांग्रेस र माओवादीबीच चुनावी तालमेल भएको छ । सन्धीखर्कमा कांग्रेसले मेयर र माओवादीले उपमेयर लिएर तालमेल भएको छ ।
शितगंगा नगरपालिकामा कांग्रेसले मेयर र माओवादीले उपमेयर लिएर तालमेल भएको छ । मालारानी गाउँपालिकामा माओवादीले अध्यक्ष र कांग्रेसले उपाध्यक्ष लिएर तालमेल भएको छ भने भूमिकास्थान नगरपालिकामा पनि माओवादीले मेयर र कांग्रेसले उपमेयर लिएर तालमेल भएको छ ।
प्युठानको प्युठान नगरपालिकामा माओवादीले मेयर र जनमोर्चाले उपमेयर लिएर तालमेल भएको छ । स्वर्गद्धारी नगरपालिकामा जनमोर्चाले मेयर र माओवादीले उपमेयर लिएर चुनावी तालमेल भएको छ ।
ऐरावती गाउँपालिका अध्यक्षमा राजमो र उपाध्यक्षमा माओवादीले उम्मेदवारी दिएर तालमेल गरेका छन् । गौमुखी गाउँपालिकामा पनि जनमोर्चाले अध्यक्ष र माओवादीले उपाध्यक्ष लिएर तालमेल गरेका छन् । नौबहिनी गाउँपालिकामा पनि उनीहरुबीच तालमेल भएको छ ।
रोल्पामा कांग्रेस–एमाले, विप्लब
रोल्पाको थवाङमा विप्लब माओवादीले अध्यक्ष र कांग्रेसले उपाध्यक्ष लिएर तालमेल भएको छ । माडी गाउँपालिकामा कांग्रेसले अध्यक्ष र एमालेले उपाध्यक्ष लिएर तालमेल भएको छ ।